Bixinta Dhaxalka - Cuntooyinka Lugaha
Wax Siinta Dhaxalka
Ku deeqa hadiyad dhaxal ah Cuntooyinka Lugaha la dhigaa waa hab fiican oo saameyn waara ugu leh bulshadaada. Markaad ku darto Cunnooyinka Gawaarida doonistaada ama qorshahaaga dhismaha, waxaad gacan ka geysaneysaa sugidda mustaqbalka Cunnada Wheels iyo inaad hubiso in waayeelka bulshadaada ay helaan nafaqada iyo booqashada maalinlaha ah ee ay u baahan yihiin sannadaha soo socda.
Habka ugu toosan ee aad ugu deeqi kartid tabarucaadka dhaxalka ah waa adiga oo ku daraya Metro Meals on Wheels doonistaada ama qorshahaaga dhismaha. Waxaa jira laba qaab oo fudud oo aad tan ku sameyn karto:
Dhaxalka Waxaan iskaashi la yeelannay FreeWill si aan kaaga caawino inaad ku abuurto doonistaada sharciga ah iyo hadiyadda dhaxalka onlayn, lacag la’aan. Adigoo adeegsanaya aaladda aaminka ah ee FreeWill, waxaad ku qori kartaa qaddar doolar ama boqolkiiba hantidaada aad rabto inaad aado Meals on Wheels. Abuur qorshahaaga bilaashka ah iyo hadiyadda dhaxalka maanta.
Haddii aad doorbideyso inaad la shaqeyso qareen, waxaad sidoo kale ku keydsan kartaa kharashaadka sharciga adiga oo adeegsanaya FreeWill qor marka hore rabitaankaaga iyo hadiyaddaada la qorsheeyey.
Haddii aad adigu kaligaa abuureyso ama wax ka beddeleyso rabitaankaaga, waxaad u adeegsan kartaa luqadda gaarka ah ee soo socota dardaaranka Meals Metro on Wheels: I [magacaaga] sii Metro Meals on Wheels Inc, 1200 Washington Ave., Suite #380, Minneapolis, MN 55415, EIN #31-1501057, boqolkiiba hantideyda, ama wadarta dollar, ama hadhaaga hantidayda.
Naqshadeynta Ka-faa'iideystayaasha: Qaab kale oo fudud oo canshuur-faa'iido leh oo loogu daro Metro Meals on Wheels qorshahaaga dhismaha waa iyada oo loo qoondeeyo ka-faa'iideyste caymiska nolosha ama koontadaada hawlgabnimada. U qoondee Cunnada metrooga ee 'Wheels, Inc.', EIN #31-1501057, lana xiriir wakiilkaaga caymiska ama qorsheeyaha dhaqaalaha si aad u xaqiijiso qorshayaashaada.
Waxaa jira siyaabo kale oo badan oo loo sameeyo hadiyado dhaxalgal ah iyo Metro Meals on Wheels waxay ku faraxsan tahay inay kula shaqeyso adiga iyo qorsheeyahaaga maaliyadeed si loo daboolo baahiyahaaga. Oo haddii aad qorsheyneyso inaad sameyso hadiyad dhaxalgal ah, waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno! La xidhiidh Metro Meals on Wheels Agaasimaha Fulinta Patrick Rowan (612) 623-3363 ama [email protected] si aad ugala hadasho qorshooyinka siinta dhaxalkaaga.
Barnaamijyada Meals on Wheels ee Magaalooyinka Mataanaha ah waxay bixinayeen nafaqo waxayna ka caawinayeen dadka waayeelka ah inay si madax-bannaan ugu noolaadaan in ka badan 40 sano. Caawimaaddaada, Cunnooyinka iyo Wheels waxay awoodi doonaan inay sii wadaan adeeggan muhiimka ah sanadaha soo socda!